Google Adsense Izvozvi Kuita Mari Zvangu | Martech Zone
Google Adsense Izvozvi Kuita Mari Zvangu
Muvhuro, Nyamavhuvhu 25, 2008 Muvhuro, Ndira 7, 2013 Douglas Karr
Kwenguva yakati rebei ndakamhanya ndakashambadzira kushambadzira kushambadzira mune yangu yekushandisa uchishandisa iyo PostPost plugin ini ndakagadzira yeWordPress uye Commission Junction kushambadza. Yakanga isiri chaiyo sosi yemari yakakosha yemari, asi, pamwe madhora mashoma pamwedzi.
Vhiki rino, ndakanyorera neGoogle Adsense kushandura chikafu changu kubva kuFetburner kuenda kuGoogle. Maitiro ekuita izvi achiri echinyorwa, asi usatya, haungarasikirwe neanyorese mumwe muchiitiko ichi. Makero ese ari maviri anoramba achiburitsa chikafu, asi kuisa chikafu paGoogle ine mabhenefiti emari sezvo ichizokupa mukana weGoogle Adsense yekupa feeds.
Ingo pinda muakaunti yako yeAdsense uye uteedzere mafambiro ekuisa manyore feed yako. Zvakatora rinenge vhiki kuti yangu ishandurwe. Google iri kuvimbisa kuti ichi chichava chiito chekuita mune ramangwana.
Ichiri chisina kukwana, zvakadaro! Tarisa uone kushambadza kuri pamusoro kubva kusangano rakanyanyisa rezvematongerwo enyika iro rakabatana nepepa rangu nezve Joe Biden. Chinyorwa chakadomwa chaive chiri chinotyisa kutaridzika paBiden's makumi mana emakore nhoroondo yekuvhota nemukoma mukoma uye nekusiya mukomana mudiki kuti aturike.
Ini handitarisiri yakawandisa mari kubva kuAdsense pane chikafu. Vanhu vazhinji vari kungodaidza chirongwa ichi Webmaster Hutano.
Tags: chikafugoogle adsensekuita mari
Enda Girinhi: 5 Nzira dzekumira Uchishandisa maCD nemaDVD
WordPress uye MySQL: Chii Chako Shoko Rako Kuverenga?
Aug 25, 2008 na10: 18 PM
Chaizvoizvo Douglas ndanga ndiine maRSS ads kweinenge vhiki izvozvi uye pane mamwe mazuva ndine mari iri nani kubva ipapo kupfuura yandinoita kubva kublog blog AdSense. Haisi chokwadi kana izvo zvichizogara nekufamba kwenguva asi zvine chokwadi kuti inyuchi ikozvino.
Aug 26, 2008 pa 7: 35 AM
Izvo zvakanaka kunzwa! Ndiri kutarisira kuona ichisimuka. Nezuro yaive $ 0.01, hehe.
Aug 26, 2008 pa 6: 43 AM
Ini ndinoidaidza iyo webmaster hutano nekuti i "handout" chaizvo uye kwete nekuti haina mari yakanaka - yedu rev ​​ane mashanu manhamba pamwedzi kubva pairi.